Xeelada Ciyaarta turubka Balaagjaaga looga tala galay ciyaaryahanada Soomaaliya | bogga ciyaarta turubka Balaagjaaga77
Ugu Weyn Ee	/ Istaraatijiyad Blackjack
Xeelada ciyaarta turubka Balaagjaaga
Xaqiiqda ah inaad ogtahay xeerarka jajabka ee madow ma kaa caawinayaan waxyaabo badan oo aad ku guuleysan kartid cayaartaan. Waxa aad u baahan tahay si kor loogu qaado fursadaada guuleysi waa tilmaamaheena istiraatiijiyadeed ee khayaali ah. Sida aad arki doonto, istaraatiijiyadaha jira ee jajabka madow waxay ku xiran yihiin nooca ciyaarta.
Intee in badan ayey ka maarmaysaa Blackjack?
Waxay ku xiran tahay casino, laakiin waxaad ku ciyaari kartaa cayaar kasta oo ka mid ah muraayadaha laga bilaabo 1 ilaa 8. Qeybaha cayaaraha badankoodu waxay bixiyaan muraayado madadaalo ah oo badan, sababtoo ah waxay ka dhigeysaa inay ku adkaato ciyaartoyda inay tiriyaan kaararka. Xisaabinta waa istaraatejiyad horumarineed oo hor leh, waxaanan diiradda saari doonaa marka dambe.
Waxaan diiradda saari doonaa isku dayga aan ku ogaaneyno istaraatiijiyada ugu fiican ee bilicda garaacista ee bilowga ah. Waxaad baadhi doontaa istaraatiijiyadaha xirmooyinka madow ee kala duwanaa iyadoo ku xiran tahay qaabka aad u ciyaareyso. Tusaale ahaan, istiraatiijiyadii madadaalinta 6-da gaduud ma aha mid la mid ah kii aad isticmaali laheyd markaad ku ciyaareyso kaliya 52 kaadh.
Waxyaabaha muhiimka ah ee ay tahay in la tixgeliyo waa inaysan jirin istaraatiijiyooyin ku habboon garsoorka madow. Jaantusyada hoose ee ku xusan waxay ku saleysan yihiin xisaabaadka xisaabta. Waxay hagaajin doonaan fursadahaaga aad ku guuleysan karto gacan kasta, laakiin ma damaanad qaadi karaan guusha mustaqbalka fog.
Istaraatiijiyada Hal Xardhan ee Blackjack
Marka hore, waxaynu eegaynaa istiraatiijiyadda asaasiga ah ee asaasiga ah. Xasuusnow, waa inaad isticmaashaa oo keliya isticmaalka shaashaddan khatarta ah ee khatarta ah haddii aad ku ciyaarayso wadarta 52 kaadh.
Aynu qaadano waqti aan kaga doodno maxaa yeelay waa mid ka mid ah jaangooyooyinka asaasiga ah ee ugu caansan. Marka ganacsadaha ku siiyay laba kaadhadhka ugu horeeya, waxay noqon doontaa mid ka mid ah isku-darka lagu sheegay miiska. Doorashooyinka la soo jeediyey ee ku yaal shaxda sare ee khatarta ah ee khatarta ah waxay ku saleysantahay tirooyinka xisaabta.
Jadwalka kor ku xusan wuxuu kuu sheegi doonaa marka aan ku dhufaneynin madadaalo marka aad ciyaareyso kaliya 52 kaadh, sidoo kale markaad isku dhejiso ama kala qaybiso gacantaada. Waxaa laga yaabaa inaad ka fekereyso sida aad u xusuusto shaxanka gacanta lagu qoro, laakiin haddii aad ciyaareysid internetka, waxaad mar walba xajin kartaa barta kale ee shabakadaada oo furan ama daabac miiskaan. Maskaxda ku hay in casin-ku-salaysan dhulka aysan kuu oggolaan doonin in aad qaadato qariidadaada oo u falanqee inta aad ciyaareyso.
2 Deck Strike Blackjack Strategic Chart
Dhibaatada ayaa isbedeleysa haddii aad rabto inaad sameysid 2 gogo 'blackjack deck. Natiijo ahaan, waxaad u baahan doontaa inaad istaajiso istaraatijiyadaada si aad uga faa'iideysato khariidadda laba jibbaar garabka ah ee faa'iidadaada.
Qayb ka mid ah istaraatiijiyadaada waxay la mid tahay in la ciyaaro hal dush oo keliya. Taasina waa sababta oo ah kali taleefishinka kelida ah ee maaha wax isbedel badan marka loo eego noocyadan.
Marka lagu daro madadaalo laba jibbaar ah, waa inaad sidoo kale eegtaa kala-goyska iyo quruxda, aadna istaagto 17 ama kabadan. Waxaad tixgelin kartaa adigoo adeegsanaya shaxan istaraatiijiyadeed oo sahlan oo sahlan si looga faa'iidaysto ikhtiyaarka si loo labalabeeyo xaaladaha cayiman.
Naqshada Blackjack ee Qalabyada kale ee Game
Ma jiro istiraatiijiyad qumman oo si daacadnimo leh ujirta, laakiin la qabsashada kooraska ku salaysan tirada miisaska ayaa kaa caawin kara inaad ku guuleysato. Looma baahna in wax laga beddelo marka la ciyaarayo afar, lix, ama sideed muraayadaha. Istaraatijiyada afarta geesood ee afarta geesoodka ah ayaa khuseeysa xitaa haddii aad isticmaasho kaarar labalaab ah oo aad ku ciyaareyso.
Si kastaba ha noqotee, jaantusku wuxuu yeelan doonaa laba nooc oo kala duwan si uu u tixgeliyo marka la isticmaalayo Istaraatiijiyada 4, 6, ama 8-aad. Midka aad isticmaali doonto waxay ku xiran tahay sida uu u socdo ganacsadaha.
Jaantuska kor ku yaal waa midka aad isticmaali kartid marka ganacsigu istaago 17 jir. Si kastaba ha noqotee, ficiladaada wax yar ayay ku kala duwan tahay haddii ganacsade go'aansado inuu ku dhufto jilicsan 17.
Sida aad u ogaan karto, kala duwanaanshaha waa mid yar. Tusaale ahaan, ma aha mid caqli-gal ah in la kala qaybiyo siddeed xarun haddii ganacsade uu leeyahay Ace. Waxaa jira isbedelo kale, sidoo kale waa inay kordhiyaan lacagtaada si ay u guuleystaan gacanta.
Maxay Isbedelka Badbaadinta Anshaxu ku Guulaystaan?
Haddii aad tahay taageere ka mid ah kala-duwanaanta kala-guurka, waxaa jira waraaq sax ah oo khiyaano leh oo aad adigu leedahay. U fiirso hoosta hoose:
Sida aad u arki karto, waxaa jira xaalado badan oo ay ku haboon tahay inaad weydiisato kaar kale. Xusuuso dhowr xaaladood oo ah shaxda khariidadaha ee khayaaliga ah ee kala duwanaanta isbeddelka ayaa tilmaamaya inaadan kala qaybin laba qalin.
Tilmaamo Hagid ah oo ku saabsan sida loo tiriyo Kaararka ee Blackjack
Waxaad xaqiiqdii ka maqashay nidaamyada xisaabinta tirakoobka ah ee ay ciyaartoydu isticmaalaan si ay u garaacaan iibiyaha oo ay badiyaan. Inkasta oo istaraatiijiyada kaadhadhka tirinta kaadhadhku ay si fiican u caqli galayaan, casinos qaar ayaa ka fakaraya xeerarka, taas oo ah inaad ka taxadirto in qofna aanu sheegin waxa aad sameyneyso. Maskaxda ku hay in khiyaamadani ay khuseyso oo kaliya khadka casiis ee dhulka ku yaal, iyo, ilaa xad, si aad u noolaato madadaalo. Tirinta kaadhadhku ma shaqeynayo marka la ciyaaro qayb digital ah ee ciyaarta.
Waa Maxay Kaarka Xiddiga Blackjack?
Xisaabinta waa istaraatajiyad sahlan oo qaadata hawlo badan iyo dadaal si loo isticmaalo si waxtar leh. Nidaamkani waa wax kale oo aan ahayn hab lagu ilaaliyo inta kaarar sare iyo ka hooseeya ayaa la ciyaaray. Thanks to macluumaadkaas, waxaad kordhin kartaa fursadahaaga guusha.
Haddii aad rabto in aad wax dheeraad ah ka ogaatid geeddi-socodka, u fiirso sida aan kuugu xisaabinno kaararka blackjack ee hagaha sahlan.
Tallaabada 1. Kaar walba waa inuu qiime gaar ah leeyahay. Tirada inta badan waxay isticmaalaan nidaamka halka ay ku calaamadiyaan kaadhadhka laga bilaabo 2 ilaa 6 qiimaha "+1," kuwa laga bilaabo 7 ilaa 9 qiimaha "0," iyo kuwa ka yimid 10 ilaa A qiime ahaan "-1."
Tallaabada 2. Waxaad ku dari kartaa oo kala gedisan tahay hadba sida lagama maarmaanka u ah kaararka oo dhan. Nambarka aad hadda ku sugan tahay "xisaabinta tirinta."
Talaabada 3aad. Markaad ku ciyaareyso masalado badan, waxaad u baahan doontaa inaad qiyaasto "xisaab dhab ah." Maskaxda ku hay tirada kaararka sare iyo kuwa hoose ee laga yaabo in la xakameeyo oo la helo waqtiga saxda ah ee lagu sharxi karo. Xisaabta sahlan ee lagu helo tirinta runta ah waa in loo qeybiyo tirinta socodka iyadoo leh qaybaha soo haray.
Hadda, sii wado tirintaada runta iyo runta ah mar walba. Haddii xisaabuhu labaduba fiicnaadaan, waa in aad raacdid qadarin. Haddii kale, samir u yeelo oo sug in fursad fiican.
Taasi waa wax kasta oo aan u baahannahay in aan ku sheegno sida aan u tirin karno tilmaamaha bogga "blackjack guide". Hannaanka laftiisu waa mid sahlan, laakiin waxay qaadan doontaa wakhti yar si loo barto.
Ma waxaad ka heli kartaa macluumaad waxtar?
Thanks, waxaan mahad aad reply!
Waan ka xumahay, waayo, ku haboonayn
Fadlan noo sheeg sida qodobkan waxaa lagu hagaajin karaa